Translate manifestazione from Italian to Burmese
Results for manifestazione translation from Italian to Burmese
La manifestazione si è svolta pacificamente.
Di seguito una selezione di fotografie della manifestazione, pubblicate da Sanalla.
E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora
che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo
ထိုကြောင့်သင်တို့သည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကို မြော်လင့်၍နေစဉ်၊ ဆုတော် တစုံတခုမျှ မလျော့ဘဲ စုံလင်လျက်ရှိကြ၏။
ထိုသူငယ်သည်ကား၊ ကြီးပွား၍ ဥာဏ်သတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏။ ဣသရေလလူတို့အား မထင်ရှားမှီ တိုင် အောင် တောအရပ်၌နေလေ၏။
Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno;enon soloame, ma ancheatutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione
ယခုမှစ၍ ဓမ္မသရဖူသည် ငါ့အဘို့သိုထားလျက်ရှိ၏။ ထိုနေ့ရက်၌ တရားသဖြင့် စီရင်သောသူတည်း ဟူသော သခင်ဘုရားသည် ထိုသရဖူကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူမည်။ ထိုမျှမက၊ ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကို တောင့် တသောသူအပေါင်းတို့၌လည်း အပ်ပေးတော်မူမည်။
perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur destinatoaperire, tuttavia si prova col fuoco, torniavostra lode, gloriaeonore nella manifestazione di Gesù Cristo
သင်တို့သည် ယခုခဏခံရ၍ ဝမ်းနည်းသော်လည်း၊ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော ကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍ ရွှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏။
Mangiaronoebevvero alla presenza del Signore in quel giorno con manifestazioni di grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di Davide, lo unsero, consacrando lui al Signore come capoeZadòk come sacerdote
ထိုနေ့ခြင်းတွင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စား သောက်၍ ပျော်မွေ့ခြင်းကို ပြုလျက်ဒါဝိဒ်၏ သားတော် ရှောလမုန်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ဒုတိယအကြိမ် ချီး မြှောက်၍ ထာဝရဘုရားအောက်မှာ မင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ၎င်း၊ ဇာဒုတ်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း ဘိသိက်ပေးကြ၏။
este es mi cams (Spanish>English)hoitomenetelmä (Finnish>Hebrew)highlight6(Italian>English)atliekant (Italian>German)comes (English>Italian)aksanti sana (Swahili>English)body party (English>Portuguese)complaints, (Finnish>English)my maternal great grandfather is (English>French)wtrysku (Polish>German)vådt (Danish>Swedish)aber du hilfst mir ganz bistimmt (German>English)radoonikiiritusest (Estonian>English)mirare (Italian>Hungarian)dekoduje (Polish>German)insamlingseffektivitet (Swedish>English)limau kasturi (Malay>Chinese (Simplified))餘 (Chinese (Simplified)>Arabic)dozimetrie (Czech>Romanian)carboximidă (Romanian>English)bay leaves (English>Maltese)benzisothiazolinone (French>Spanish)don't call me madam (English>Hindi)heliopoleos (Latin>Tagalog)voluptas (Latin>Italian)